काठमाण्डौ । यदि तपाई हमेसा कार चलाउनुुहुन्छ भने आफ्नो कारमा एउटा नेल पोलिसको सिसी सधैं राख्नुहोला । यसले तपाईलाई कुनै ठूलो समस्याबाट मात्र बचाउँदैन, बरु हजारौं रुपैयाँको खर्च समेत बचाउनेछ । तर, सबैखालको नेल पोलिस चाहि होइन, पारदर्शी अथवा आम भाषामा भन्दा बिना रंग भएको नेल पोलिसको एउटा सिसी कार कुदाउँदा सधैं साथमा राख्नुहोला । यदि कुनै...
४१ सेकेण्डमा ४०० किलोमिटरको गति, यो कारले चकित बनायो विश्वलाई
काठमाण्डौ । कारको दुनियाँमा बुुगाटीले नयाँ रेकर्ड बनाएर दुनियाँलाई आश्चर्यचकित बनाइदिएको छ । जर्मनीमा यो कम्पनीको एक शक्तिशाली कारले नयाँ विश्व रेकर्ड बनाएको हो । बुुगाटी चिरोनको कारले मात्र ४१.९६ सेकेण्डमा ४००.७२७ किलोमिटर प्रतिघण्टाको स्पीड पक्रिएको छ र तुुरुन्तै जीरोमा समेत आयो । अटोको विश्वमा यो खबरले तहल्का मच्चिरहेको छ । यो सफल...
धादिङको गल्छीमा जेसीबीको आधिकारिक आउटलेट
काठमाण्डौ । नेपालका लागि जेसीबी अर्थमुभिङ तथा निर्माण उपकरणको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु अर्थमुभर्स प्रालिले धादिङको गल्छीमा अथराइज्ड रिटेल आउटलेट (एआरओ) सुरु गरेको छ । ‘एआरओ’ बाट जेसीबीका ग्राहकले विश्वस्तरीय एफ्टर सेल्स सर्भिस र स्पेयरको सुविधा पाउनेछन् । धादिङ, रसुवा, मकवानपुर लगायतका जिल्लामा जेसीबी मेसिनको संख्या बढेसँगै...
होण्डाले ल्याउँदैछ अनौठो बाइक : बिना स्टेण्ड अडिन सक्ने, चलाउँदा नलड्ने
काठमाण्डौ । होण्डा मोटरसाइकलले यस्तो एउटा बाइक बनाएको छ, जुन चलाउँदा कारजस्तै अडिन्छ र बिना स्टेण्ड पनि अडाउन सकिन्छ । हजुर, यो बाइक सेल्फ ब्यालेन्सिङ मोडमा चल्नसक्छ । साथै, यसलाई अड्याउनका लागि कुनै स्टेण्डको आवश्यकता पर्दैन । होण्डाको यो सेल्फ ब्यालेन्सिङ बाइकको नाम ‘राइडिङ असिस्ट’ राखिएको छ । कस्तो छ क्षमता ? यो बाइक मानिसको...
टुथपेस्टले नै हट्छ कार/बाइकको स्क्र्याच, धेरै खर्च किन गर्ने ?
काठमाण्डौ । तपाईको कार तथा बाइकमा लागेको एउटा स्क्र्याचले पूरा लुक्स बिगारिदिन्छ । भीडभाडयुक्त सडकमा यात्रा गर्दा स्क्र्याच नहोस् भन्दा पनि स्क्र्याच भइदिन्छ । यदि कार तथा बाइकमा लागेको स्क्र्याच बनाउनलाई सर्भिस सेन्टर वा ग्यारेज जानुुभयो भने तपाईको निकै धेरै खर्च पनि हुनसक्छ । तर, केही यस्ता सामान्य तरिका समेत छन्, जसलाई अपनाएर आफ्नो...
भट्टराई र गजुरेल बने नेपालका रोड सेफ्टी अडिटर
वासिंगटन डिसी । आईआरएफ(इन्टरनेसनल रोड फेडरेसन)को आयोजनामा अमेरिकाको राजधानी वासिङ्गटन डिसीमा ‘रोड सेफ्टी अडिट’ तालिम सम्पन्न भएको छ । सो तालिममार्फत नेपालका दुुई प्रशिक्षक समेत रोड सेफ्टी अडिटर बनेका छन् । गत अगस्ट २९ देखि ३१ तारिखसम्म सो तालिम भएको थियो। नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नासा) का महासचिव गोविन्द भट्टराई तथा रोड सेफ्टी...
महिन्द्राले ल्यायो 'बिग, बिगर, बिगेस्ट अफर'
काठमाण्डौ । दशैं–तिहारको अवसरमा महिन्द्राले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि बिग, बिगर, बिगेस्ट अफर ल्याएको छ । “ठूलो छ अफर सबैभन्दा, ठूलै पाइन्छ महिन्द्रा किन्दा”भन्ने नाराकासाथ आएको यस अफरअन्तर्गत नेपालभरका जुनसुकै शोरुमबाट महिन्द्राको कुनै पनि गाडी किन्ने बित्तिकै ग्राहकले स्क्रयाच्मा एक तोलासम्म सुन र साथमा महिन्द्रा गस्टो १२५...
‘नाडा शो’बाट सवारी किन्नुहुँदैछ ? यी कुरामा ध्यान नदिए फसिन्छ !
काठमाण्डौ । नयाँ कार तथा मोटरसाइकलको खरिदारी कुनै पनि व्यक्तिका लागि खास अवसर हो । कार तथा मोटरसाइकल खरीद गरेर लैजानुुअघि कयौं यस्ता कुराहरु हुन्छन्, जसको बारेमा तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । भदौ १३ गते मंगलबारदेखि काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको ‘नाडा अटो शो’ जस्तो धेरै ग्राहकहरु आउने शो तथा उत्सव, दशैंतिहार जस्ता चाडपर्वको...
सुजुकीको गाडी किन्दा डबल मज्जा अफर
काठमाण्डौ । जापानी मोटर कम्पनी सुजुकीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिजी मोटोकर्पले ‘पर्वोत्सव’ योजना अन्तर्गत ‘डबल मज्जा’ अफर ल्याएको छ । काठमाडौंमा मंगलबारबाट सुरु भएको नाडा अटो शोको अवसरमा कम्पनीले इग्निस र डिजायर गरी दुई नयाँ मोडलका कार सार्वजनिक गर्दै कम्पनीका सम्पूर्ण गाडीहरुमा ‘डबल मज्जा’ अफर उपलब्ध गराएको हो...
नेपालमा आयो सुजुकीको इग्निस, यस्ता छन् विशेषता
काठमाण्डौ । सुजुकीकाका चारपांग्रे सवारी साधनको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता अरुण ईन्टरकन्टिनेण्टल ट्रेडर्सले बहुप्रतिक्षित प्रिमियम अर्बान कम्प्याक्ट भेहिकल ईग्निस सार्वजनिक गरेको छ । भोलिदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने नाडा अटो शोमा यो कारको विशेष प्रदर्शनी हुनेछ । ‘इग्निस उत्कृष्ट डिजाइन, एण्ड्रोइड अटो र एप्पल...
बेस्ट सेलर डिजायरको फेसलिफ्ट भर्जन नेपालमा, तहल्का मच्चाउने दाबी
काठमाण्डौ । सुजुकी कारको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सीजी मोटोकर्पले आफ्नो बेष्ट सेलर मोडल डिजायरको फेसलिफ्ट भर्जन सार्वजनिक गरेको छ । हियरटेक च्यासिस प्ल्याटफर्ममा आधारित भई निर्माण गरिएकाले कारको वजन हल्का छ । पीयसको रोबष्ट च्यासिस डिजाइनका कारण कारमा यात्रा गर्नेका लागि भने अझ सुरक्षित भएको कम्पनीले बताएको छ । सुरक्षामा...
यामाहाको दसैं योजना–‘क्यास–इन–ओ’
काठमाण्डौ । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले महान चाड दसैं र झिलिमिली पर्व तिहारलाई लक्षित गरी नयाँ ग्राहक योजना ल्याएको छ । ‘क्यास–इन–ओ’ अर्थात् ‘क्यास इन्स्ट्यान्ट अफर’ नाम रहेको यो योजनामा यामाहा ब्रान्डका मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकले तुरुन्तै सातहजार...